Palavras - Portugués - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: palavras (Portugués - Birmano)
Erro ao consultador palavras chave.
Procurar ficheiros utilizando palavras-chave
စကားလုံးများကို အသုံးပြုကာ ဖိုင်များကိုရှာပါ
အချို့တို့သည် ပေါလု၏စကားကို ယုံကြ၏။ အချို့တို့သည် မယုံဘဲနေကြ၏။
O que responde com palavras retas beija os lábios.
မှန်သောစကားကို ပြန်ပြောတတ်သောသူ၏ နှုတ်ကို လူတိုင်းနမ်းလိမ့်မည်။
အဘယ်မည်သောသူမျှ ဖြားယောင်းသောစကားအားဖြင့် သင်တို့ကို မလှည့်ဖြားစေခြင်းငှါ၊ ဤ စကားကို ငါပြောဆို၏။
တဖန်သွား၍ ရှေ့မြွက်ဆိုသည်နည်းတူ ဆုတောင်းတော်မူ၏။
Jó fala sem conhecimento,e�s suas palavras falta sabedoria.
ယောဘသည် နားမလည်ဘဲပြောမိပြီ။ သူပြော သောစကားသည် ပညာစကားမဟုတ်။
ငါ့စကားကိုစေ့စေ့နားထောင်၍ ငါ့အားနှစ်သိမ့် ခြင်းကို ပြုကြလော့။
ထိုစကားတော်ကြောင့် ယုဒလူတို့သည် တဖန်ကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏။
ကျေးဇူးတော်ကို သိသောစိတ်နှင့်ခံယူလျှင်၊ အဘယ်အရာကိုမျှ မပယ်မရှောင်ရ။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ အရာရာတို့သည် စင်ကြယ် လျက်ရှိကြ၏။
κυριον (Griego>Español)maine call nahi kiya tha (Hindi>Inglés)zheng (Malayo>Chino (Simplificado))pero habang patagal ng patagal (Tagalo>Inglés)hverjum (Islandés>Inglés)احا (Árabe>Inglés)my eggs is big (Inglés>Portugués)uten (Noruego>Griego)penurunan harga (Malayo>Inglés)howz uhh (Hindi>Inglés)同学们在挥国旗 (Chino (Simplificado)>Malayo)rahul apne ghar par hai (Hindi>Inglés)page 53 of 99 (Inglés>Ruso)encrypted meaning (Inglés>Tagalo)caféine (Francés>Japonés)reimburse (Italiano>Español)donde esta papito (Español>Inglés)tél (Húngaro>Francés)augenblicklichen (Alemán>Danés)beth wnaeth john yn y llyfrgell (Galés>Inglés)opstel my beste sport dag by die skool (Afrikaans>Inglés)拉拢不同作案背景的犯罪分子 (Chino (Simplificado)>Malayo)netilmicin (Inglés>Español)这至少不能算是法治国家的状况 (Chino (Simplificado)>Francés)are (Italiano>Finés)